पाइल्स भएर हैरान हुनुहुन्छ ? घ्यु कुमारी र काँचो केरा हो यसको अचूक औषधि | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
पाइल्स भएर हैरान हुनुहुन्छ ? घ्यु कुमारी र काँचो केरा हो यसको अचूक औषधि
घ्यु कुमारीको गुदी पाइल्सका रोगीका लागि धेरै उपयोगी हुन्छ। पाइल्सका कारण मलद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ। त्यसैले विस्तारै घिउकुमारीको गुदी लगाउने जसले शीतलता प्रदान गर्छ। बदामको तेल अर्थात् बदाम रोगन पनि लगाउन सकिन्छ। एक दिनमा ३-४ पटक मलद्वारमा बदामको शुद्ध तेल लगाए आराम मिल्छ।
पाइल्सका रोगीले तारेको-भुटेको तथा रेशारहित खाना खानु हुँदैन। कब्जियत हुन नदिन रेसायुक्त (फाइबर) खाना प्रशस्त खानुपर्छ। अलिभको तेल लगाउँदा पनि आराम प्राप्त हुन्छ । मूलाको रस बिहान बेलुका खाँदा पाइल्सका रोगीलाई फाइदा हुन्छ । काँचो केरा उसिनेर बिहान-बेलुका खाँदा फाइदा मिल्छ । आँपको कोयाको गुदीको चूर्ण महसँग मिसाएर खान सकिन्छ। एजेन्सी
5/14/2017 12:45:00 PM